War deg deg ah:Shacabka Muqdisho oo ku soo food leh arin ku cusub – SOOMAALPEDİA
Posted on May 10, 2016 by SOOMAALPEDİA
Kadib Markii maalintii shalay gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho uu ku dhawaaqay in la keenay kaar cusub oo ay qaadanayaan muwaadiniinta Soomaaliya ayaa arintaasi waxaa hanjabaad kasoo saaray taliska booliska Banaadir.
Cali Xersi Barre Cali Gaab taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay iney ka shaqeyn doonaan sidii loo dhaqan gelin lahaa qaadashada NATIONAL ID oo ah mid cusub oo maamulka gobolka uu keenay.
Cali Gaab wuxuu ka hor sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubno kale oo maamulka gobolka ka tirsan hortooda iney xabsiga dhigi doonaan qof kastaa oo aan qaadan kaarkaasi cusub.
“Gudoomiye annaga waxaan balan qaadeynaa inaan dhaqan gelino qaadashada kaarkaan cusub oo cadeynaya muwaadinimada qofka, qofkii aan qaadan waan soo xireynaa laakiin adiga hadhow soo daaya hana dhihin”ayuu yiri Cali Gaab.
Cali Xersi, wuxuu sheegay in laamaha amaanka ay diyaar u yihiin dhaqan gelinta qorshayaasha dowlada Soomaaliya.
Xiligii gudoomiye Tarsan ayaa waxaa Muqdisho ka bilaabatay qaashada National ID, walow markii dambe ay joojiyeen xildhibaanada baarlamaanka.
Posted in Social, Society